Everchọtụlaịmaliteblọgụnkegị？ Maọbụ、すでにnweelaブログịna-ejighi n’aka etuịga-esi ruoọkwankeọzọ?
Ọbụrụnaazịzagịbụ "ええ" mgbeahụpeeji abụebeịkwesịrịịdị.
0.0.1 N’ime ntuziakaịdeblọgụ、ịga-amụta：
0.0.2 ジニ・クパタラ・ヌドゥ・ア？これからgbasara onwe m
1 Isi nke 1.tingtọliteブログna Scratch
1.1 1.Họrọezigboウェブホストna aha ngalaba
1.1.1 Aha ngalaba-Ebee debanye aha?
1.1.2 BochumWeebụ-Ebee ka a ga-esi wezie Bloggị
1.1.3 Akwadoroブログnke akwadoro maka初心者
1.2 2. Gosiputa ngalaba DNS n’ebe onye webgịnọ
1.3 3.WụnyeWordPress na web hostgị
1.3.1 Ntinyeakwụkwọntuziaka WordPress
1.3.2 WụnyeWordPress OtuPịa
1.4 4.ChọtaPeeji WordPress Admingịma banye
1.5.3 Ngwa mgbakwunye makaarụmọrụblogkachasịmma
1.5.4 Ngwandọkụrịtamaka Gutenberg
2 Isi nke 4.ingchọtaNiche naingmepụtaỌdịnaya
2.1 Otu esiahọrọnicheịdeblọgụziri ezi?
2.1.2 2. Iheịchọrọ
2.1.3 3. Isiokwu nwere ikeịnọgigide
3 Isi nke ise 5.Growtọブログ
3.1 1. Dei ihe ndi mmadu choro iguta
3.2 2. Solo ndi obodo gi
3.3 3.Gbalịamee kaブログgịdịmfeọgụgụ
3.4 4. ikwuブログ
4 Isi nke 7. Iji BlogdeblọgụEfu
4.4 ンツジアカ & にょちゃ
4.5 ソーシャルメディア、アフア & SEO
4.6 NchịkọtaNtanetị & NrụpụtaWeebụ
5 Deblọgụugboro ugboro
ジニ・クパタラ・ヌドゥ・ア？これからgbasara onwe m
Ezubere M Bochum NzuzoWepụta（WHSR）na 2008、na ekeleakụkụnke nnabata nnabataịdeblọgụanyịji ike gaa ike。 Kemgbeahụ、WHSR etolitelaghọrọotu n’imesaịtịndịisi na Net makandụmọdụntanetị、maadọtalam ka ha mataụfọdụolu siri ike naịdeblọgụnke oge a-ha niileazimeaọaọaọaọaọaọaọaọaịkọ 、na-emeọbụihe a ga-eji nweta onyeọbụlanke na-ebidoịgaebeịdeblọgụnke onwe.
Site na ntuziakaenweghịnzuzu a、m ga-ewetaragịụfọdụngwa ngwa、nghọtadịmfenghọtanakarịaụzọdịmma maka maka nsogbuịdeblọgụgị-sitere naahụmịhenkemụne me nanụun na n n n nu na n’u.
My odeakwụkwọprofaịlụna Problogger.net-Mna-ebipụtaoge niile naọtụtụsaịtịndu bloggerdịelu n’etiti 2015-2018.
Isi nke 1.tingtọliteブログna Scratch
Ọdịmfe madịkwaọnụalaịmaliteblọgụna 2020.
Akụrụngwaịdeblọgụkachasịewu ewu、WordPress.org、bụn’efu。 Ọkachaamara emepe emepe WordPress na pluginsbụn’efu。 Ma enwereọtụtụnde nkuzi n’efu na-amalitegị（gụnyerenke a）。 Naanịiheịga-eribụịmaliteblọọgụbụegoịna-akwụmaka onyewebụsaịtịna aha ngalaba.
O doro anya、ọnwere ike nweta okeaghụghọnaemesịaogbo; mana n’otu mgbe、ịdeblọgụnwere ike ime onyeọbụlanwerekọmputanaInternetntanetị。 N’ezieịnwere ikeịmepụtablog n’ezie ma mee kaọna-agbaọsọna nkeji 20 na-esote。 Nzọụkwụndịakpọtụrụaha na usorondịabụkpọmkwemotu m siemepụtablọọgụm na mbido.
Họrọezigboウェブホストna aha ngalaba
Gosipụtangalaba ngalaba DNS na onye na-elekọtaweebụgị
WụnyeWordPress na web hostgịọhụụ（dịmfe iji ihenrụnyeakpaaka）.
M ga-eje ijegịn’okpuru ebe a。 Na-eche free ijiọbụrụnaịmarala etu esi ahazi blog nkegị.
1.Họrọezigboウェブホストna aha ngalaba
イジビドブログgbara onwegị、ịga-ebuụzọchọọngalaba aha naakaụntụnnabata web.
Ngalabagịbụaha bloggị。 Ọbụghịiheanụahụịnwere ikeimetụmaọbụhụ; kamaọbụụdịmkpụrụedemedena-enyeweebụsaịtịgịakaịmata-dịka ahaakwụkwọmaọbụebe。 Ngalabagịna-agwa ‘ndịọbịa’ụdịblog ha na-eleta.
Nlekọtaweebụ、n’aka nkeọzọ、bụebeịna-echekwaọdịnayabloggị-okwu、isiokwu blog、onyonyo、vidiyo、nandịọzọ.
Aha ngalaba-Ebee debanye aha?
あなたは池ịhọrọma denye aha ngalabagịsite na ngalaba na-edeba ahaを知っていました。 GoDaddy、AhaCheap、Hover、na Domain.combụụfọdụn’imendịna-edebanye ahandịama ama naahịa.
Rịbaama naọdịmkpaịdebanyeaha ngalaba na onyena-elekọtaweebụgị。 Naanịn’ihi na onyena-elekọtaweebụgịna-enye ngalaba n’efuanaghịapụtanaịkwesịrịikwe kaụlọọrụBochumna-achịkwaaha ngalabagị。 Onwe m、ana m eji NameCheap jikwaa aha ndebanye aha ngalaba m; manandịọzọna-edeba aha ngalaba ahakwesịrịịdịmma。 Site n’ime nke a、enwere m ikeịgbanwengalaba ngalaba DNS m ogeọbụlaachọrọm ma zereịbụonyeakpọchirim otu web host otu。 Ana m akwadosigịike ime otu iheahụmaka nchebegị.
BochumWeebụ-Ebee ka a ga-esi wezie Bloggị
Banyerentanetịweebụ、lelee nke mhọtaweebụkachasịmma na ndebanye nyocha nyocha.
Makandịmbido、m na-akwadoịmaliteobere na onyeọbịaweebụna-ekerịta.
Na ntinye nnabata-Ọbụezie nanchịkwannabatadịntakịrịma e jiri yatụnyerendịọzọ（VPS、igwe ojii、wdg）、ịga-achọobere ego（oge <$ 5 / mo na ndebanye）na iheọmụmaọrụiji malite。 Mgbeịna-ahọrọonyeọbịaweebụmaka bloggị、ihendịabụihe ise ga-echebara echiche：
pụrụịdabere – Blọọgụgịkwesịrịiguzosi ike madịn’ịntanetị24×7.
速度 – needchọrọonye nnabata nke na-ebu ngwa ngwa n’ihi naọsọna-emetụtaahụmịheonyeọrụna ogoọchụchọ.
Ịnyeọnụahịa – ボーフムナ <$ 5 / mo bu ezigbo mmalite、ichoghi oru ego di elu na ogbo a.
イメụロナエト – will ga-achọnkwalitendịọbịa（atụmatụndịọzọ、ikike savandịọzọ、wdg）kablọọgụgịna-eto.
nkwado – Thentanetịna-agbanwe agbanwe mgbe niile、ọdịmma mgbe niileịnweonye nyeregịnkwadon’akụkụọrụaka.
Akwadoroブログnke akwadoro maka初心者
Nlekọtablọọgụabụọna InMotion Bochum maka $ 3.99 /月.
Alelebụotu n’ime web host webdịọnụalakarịa、ọkachasịn’oge nnabataafọezumike nka。 N’agbanyeghịịbụụlọọrụBochum mmefu ego、Hostinger na-enyeọtụtụatụmatụatụmatụBochumdịmma maka makandịna-edeblọgụ.
SiteGroundna-akwụụgwọ$ 3.95 / mo maka otuブログ.
プロNDỤMỌDỤ：Maka na onye na-ahụmakaweebụna-ewu ewu、apụtaghịnaọkachasịmma maka bloggị。 Leleearụmọrụọbịama lelee nkeọmatupu ime mkpebi.
2. Gosiputa ngalaba DNS n’ebe onye webgịnọ
Ọzọ、ịkwesịrịimelitendekọDNS na ngalaba aha na-edeba aha（ebeịdebanyere aha ngalabagịnanzọụkwụ＃1）na-arụtụaka na savaweebụgị（InMotion Hosting、Hostinger maọbụSiteGround）.
DNS guzoro na ngalaba Aha Sistem ma a na-eji ya eduzi onyeọrụọbụlana-abatakwupụtaadreesịIP nke savaahụ。 Yabụ、mgbe onyeọrụbatara“ WebHostingSecretRevealed.net” ihendekọDNS ga-ebugoteadreesịIP nke onye web m ma jeere onyeọrụmsaịtịahụ.
Ihe Nlereanya：Itinye aka nawebsaịtịna InMotion Hostingerer na GoDaddy.
Nke abụntuziaka usoro maka iji melite blog bloggịna GoDaddyまたはNamecheap.
3.WụnyeWordPress na web hostgị
Iji maliteịdeblọgụsite na iji WordPressịga-ebuụzọwụnyesistemụahụn’ime onyena-elekọtaweebụgị。 ike iji nke a mee nke a、maọbụiji ngwanwụnyeotu ngwa-ngwa。メソッドzọabụọadịmfe nfe ma enwere ike yame ya ngwa ngwa.
Na ngwa ngwa、ebe abụusoroịkwesiriịme：
Nbudata ma kpochie ngwugwu WordPress na PCgị.
Mepụtanchekwa data maka WordPress na savaweebụgị、yana onyeọrụMySQL nke nwere ihehegwùniile makaịnwetama gbanwee ya.
Kpọghariafaịlụwp-config-sample.php ka wp-config.php.
Mepee wp-config.php na ederede ederede（notepad）majupụtankọwadata nchekwa datagị.
TinyefaịlụWordPress naọnọdụachọrọna savaweebụgị.
Gbaaakwụkwọedemede WordPressahụsite naịnwetawp-admin / install.php na ihenchọgharịweebụgị。 ỌbụrụnaịwụnyeWordPress nandekọndekọ、ịga-aga：http://example.com/wp-admin/install.php; ọbụrụna i tinyere WordPress na ya onwe yana-akpọblog、dịkaọmụmaatụ、ịga-aga：http://example.com/blog/wp-admin/install.php
Ọtụtụndịna-edeblọgụn’oge aanaghịetinye aka WordPress ha.
Site na nkwado nkekerụntinyeọpịpịdịkaSoftaculous na Mojo Market Place（ọdabere na nke web hostịna-eji）、usoronrụnyedịezi n’iru ma enwere ikeịmeya na ole na oledịmfe.
Makantụakagị、ihe onyonyondịa na-egosi ebeịnwere ikeịchọtanjikwanwụnyeakpaakagịダッシュボード。 IjiwụnyeWordPress、dịnnọọpịaakara ngosi gbara gburugburu ma soro ntuziaka akaebe zuru oke-sistemụWordPressgịkwesịrịịdịna-arụọrụnaerughịnkeji ise.
Ihe Nlereanya：ike iwunye WordPress onyena-elekọtaweebụgịnaanịole na ole na iji iji Hostinger Auto Installer（gaa na Hostinger ebe a）.
Ike nwere ikeịdịiche makandịwebna-ahụmakaweebụmana usoro abụotu。ヤ・メア・ヌテラ・マ・オ・ブル・ナ・イ・ジギ・オトゥ・ンディ・アガ・ア・マ・ナ・エ・ゴシ・ネベ.
Onwe m eche na WordPressbụusoroịdeblọgụkachasịmma maka初心者。 Dabere naọnụọgụgụsitere na Wuru Na、ihe kariri 95％nkeblọọgụna United States ka eji wulite WordPress。 N’ụwaniile、ọfọrọnke nta Ndeblọọgụ27 na-agba na WordPress.
4.ChọtaPeeji WordPress Admingịma banye
Ozugbo itinyelasistemụWordPressgị、ga-enyegịURL kaịbanyena ibenchịkwaWordPressgị。 N’ọtụtụoge、URLahụga-abụihedịka nke a（ọdabere na foldaịwụnyerena WordPress）：
Gaa URL a wee banye aha njirimara napaswọọdụgịsite n’ebeahụ、ga-anọugbua na njedebe（dashboard）nkesaịtịWordPressgị-nke abụakụkụnke blog ebenaanịgịdịkaonyere kenwekwa.
Mepụtablogpostọhụrụna WordPress Gutenbergọhụrụ.
WordPressdịWordPresskachasịọhụrụn’oge ederedebụụdị5.3.2-na ndabara kaịga-eji WordPress Gutenbergdịka onye edemede ederede。 Gutenberg na-eweta mgbanwedịukwuu na nyiwe WordPress。 Nke a bara uru makandịmbido ebeọbụnaọtụtụihedịkaịtọliteụlan’azụ na ihendịọzọanaghịachọụkọ。うそろんごんがなにええれあなんじくわおきりきりえでで.
Iji dee mabipụtaọkwáọhụrụ、gọọgharịagaan’akụkụaka ekpe、pịa ‘投稿’> ‘TinyeNkọwa’ naịga-eduzi na ngere ederede。 P ‘a’ Preview ‘kaịhụchaihe ihedịna njedebe（ihendịna-agụgịga-ahụ）、pịa’Bipụta ‘ozugbo oge zuru ezu.
Gaa na：Akwụkwọedemede WordPress
Nke abụebeịnwere ikeịnwetaisiokwu WordPress n’efu。 Ederedeedepụtaranaakwụkwọndekọa na-agbasoụkpụrụsiri ike nkendịmmepe WordPress nyere、ya mere、n’echiche m、nke abụebekachasịmma iji nwetaatụmatụisiokwaadịghị.
Ụzọọzọịga-esi nweta isiokwudịelu nke ana-akwụụgwọbụịdenyeaha na Clubs Club WordPress.
Ọbụrụna nke abụogembụịnụrụbanyereklọbOkwu egwuregwu、lee ka o siarụụrụ：Youna-akwụego ole iji sonyereklọbahụ、ịna-enwetakwaatụmatụdche nache na enche a na-ahazi usoro ngosi enyere naklọbgụTheme.
mara Gburugburu、Studio Press、na Ihe eji eme ihebụatọWordPress Gburugburuklọbm nwere ike ikwu.
Enwerewetụtụndịọzọnọn’ebeahụ-ụfọdụklọbna-ebute otuụlọọrụdịiche iche、dịkandịezigboụlọahịamaọbụụlọakwụkwọ; maanyịga-ekpuchiatọn’ime isiokwu a.
Mara Gburugburu Gburugburu-Karịrị80adịgborojaWordPress gburugburu、pịaebe a iji lee onodu okwu mbu.
Gaa na：StudioPress.com。 Ahịa：$ 129.95 / isiokwu maọbụ$ 499.95 /ndụ
ỌbụrụnaịbụonyeọrụWordPress oge、mgbeahụ、ụn la banyere StudioPress。 Ọna-ewu ewu maka ya Jenesis Framework、ndịミニマリストna SEO-enyi na enyi WordPress kpuchie niile StudioPress gburugburu.
StudioPress na-enyeọnụahịamgbanwedịkamkpagị。 Okpokoro Genesis na isiokwu nwata nwere maka ugwo ugwo nke $ 59.99。 Ihekachasịmkpa、nkegụnyereIgodo Jenesis、na-efu $ 99ọbụla。 Ọbụrụnaịchọrọịnwetaniile gburugburu、ịnwere ikeịkwụụgwọ$ 499.
Njikere meresaịtịndịArtisan Themes nyere.
マタクウオ： Ndịabụọtụtụihendịọzọdịmfeịga-eme iji chebe blog WordPressgị
Ngwa mgbakwunye makaarụmọrụblogkachasịmma
bịananjikarịchaarụmọrụブログ。 W3合計キャッシュ naNrụọrụọsọọsọbụnhọrọkachasịewu ewu.
Img mgbakwunyearụmọrụabụọndịọzọịkwesịrịịleleIgweọkụ、na WP Super Cache。 Cloud Flarebụngwa mgbakwunye nkeụlọọrụCDNニエール、Cloud Flare; ebe WP Super Cachemepụtarasite na Donncha na Automattic、ụlọọrụmepụtaramana-arụọrụWordPress ugbu a.
Ihe mgbakwunyemkpọchibu ihe kwesiri ntaneti naụwaịdeblọgụọgbaraọhụrụ-ọna-eme kaahụmịheonyeọrụdịmma site naịbawanyearụmọrụsavaahụ、belataoaeeeeeaụeeeaụaeeeụaụeụaụeụaụeụaụaụeụa.
Ọbụrụnablọọgụgịnwereọtụtụonyonyodịna ya-tulee itinye EWWW Image Optimizer。 Ọbụotunjikarịchaihe oyiyi na-eme ka enwee ikeiwepụtaihe eserese onyonyo nkeọbáakwụkwọgị。 O nwekwara njiri akana-egosipụtamkpirisi onyonyo iji belata ogo onyonyo mgbeịna-ebugote ha。 Site na iji eseresekachasịmma、ịnwere ike belata oge ibu peeji marụpụtaarụmọrụsaịtịngwa ngwa.
マタクウオ： SEO 101 makandịna-edeblọgụmbụ
Site na ntinye nke Gutenbergnchịkọtaakụkọna WordPress 5.0、ndịna-edeblọgụnwere ikeịmepụtaọdịnayaugbu a site na ijinchịkọtaakụkọna-egbochingọngọ。 Site na ndabara、WordPress na-enyesetịpụrụngọngọọdịnayadịkaparagraf、eserese、bọtịnụịkpọoku na-eme、koodu mkpirisi、nandịọzọ。 Site naịgbakwunyena plugins Gutenberg 、, ga-agbakwunye ihendịọzọna-etinye aka（dịkaọmụmaatụ-FAQ、アコーディオン、profaịlụedemede、carousel、pịa-to-tweets、GIFブロック、wdg）na.
Stackable、Ultimate Blocks、CoBlocks iheatọdịmfe na Gutenberg Block pluginsna-akwụghịụgwọịnwale.
Isi nke 4.ingchọtaNiche naingmepụtaỌdịnaya
Nke abụnkeọhụụdịkanewbie na-amaliteblọọgụ：ha ga-ede banyereọrụha naMọnde、ihe omumentụrụndụna Tuesday、fim ha lere na Wednesde、na echichendọrọndọrọọchịchsnaingwụ Na nkenke、ndịa na-ede ederede na isiokwudịiche ichen’ejighịisi okwuọbụla.
Ee、blọọgụndịaga-ejikọtaọnụn’etitindịenyi naezinụlọha; ma nkeahụbụmaka ya.
O siri ike inwewenụọgụgụdịmkpa nkendịna-agụakwụkwọna-eguzosi ike n’ihe mgbeịna-edeblọgụna-akpaghịaka n’ihi nandịmmadụagaghịama ma naọnaọmanọ maọbụakwụkwọna-akatọakwụkwọ。 Ndịna-akpọsangwáahịaga-achọkwaịkpọsagịmaka na haamaghịiheịbụ。 Iji wuo blog na-aga nkeọma、ịkwesịrịịchọtaniche.
Otu esiahọrọnicheịdeblọgụziri ezi?
Ijichọtangingịdeblọgụziri ezi、ebe abụisi iheịga-atụle.
Ọbụrụnaọdịtụlamgbeịchere "Mga-achọkammadụdee blog banyere ya", nkeahụbụoge a-ha。 Ọbụrụnaọbụisiokwuịchọrọịmatakwubanyere、mgbeahụ、ọga-abụisiokwu nkendịọzọchọrọịma.
Kedu iheọmụmagịpụrụiche？ Kedu kaịga-esi nye ihedịiche iche na isiokwu nke onyeọbụlaọzọnwere ike ime？ Onwedịrịikeịbụsite namkparịtaụkagịnaọkachamara.
Omumaatu：Gina nkeブログ、Na-ekpuchiezughịokè、na-elekwasịanya n’inyerendịnne akaịzụliteụmụnwere mkpapụrụiche.
Cheta naịga-edeakwụkwọ、ịgụmana-ekwurịtaokwugịkwaụbọchịmakaafọole na olesochirinụ。 Ọbụrụnaịnweghịmmasịna isiokwu bloggị、ọga-esirigịike ijisi gburugburu mgbe niile.
3. Isiokwu nwere ikeịnọgigide
Ọbụezie na esemokwudịukwuu、ọgaghịeme ka okwugịbụrụebe a n’izuna-esonụ。 Dịkaọmụmaatụ、ọbụrụnaịnwerennọọmmasịna Vine ma malite na blog dabere na ya、mgbe nkeahụdaa na ejijiịga-abụnkeọdịnaya。 Ọka mma kaịlekwasịanya n’inwekwu okwu n’ozuzu、dịka "ịmepụtamgbasa ozi mgbasa oziọhana eze" maọbụ "ngwaọdịyodịegwu". N’ụzọdịotúa、ọbụrụnaụdadaa na ejiji、bloggịka nwere ikeịnọgidena-ele anya maka iheọbụlana-agbanwe ya.
Gịブログkwesịrịịdịniche na i nwere ike ime ego.
Jụọonwegịmaọbụrụnaọbụisiokwuga-adọtandịna-agụakwụkwọmamepụtaego-maọbụsite na mgbasa ozi maọbụahịa。 Ọbụrụnaịna-edeblọgụiji kwadoazụmahịagịdị、blọọgụọna-ebutendịahịaọhụrụ？ Ọbụrụnaịna-edeblọgụnaanịn’ihi naịnweremmasịna isiokwuahụ、enwereụzọịga-esi tinye blog nkegịn’otu n’otu?
M na-eji SpyFu、ngwa mgbasa ozi nke Pinye aka-naPịaakaọrụ、ijitụtauruọghọmbara uru mgbeụfụdụ。 Echiche m n’azụ nke a-ọbụrụnandịmgbasa ozina-akwụpuku kwuru puku dollar na Google Adwords、ọga-enwerịrịegoịga-eme n’ubi a。 Lee iheatụabụọmchọtara：
Ihe Nlereanya＃1：Nke abụstats mgbasa ozi maka onyena-emepụtaihe eji eme egwuregwu（na-echeụdịegwuregwudịkaAdidas maọbụNlebaỌhụrụmanantakịrị）。 Ụlọọrụa na-etinye ihekarịrị$ 100,000 kwaọnwana Adwordsdịka Spyfu.
Ihe Nlereanya＃2：Nke abụmgbasa ozi mgbasa ozi maka onye na-ewetangwanrọIT。 E nwere 20ndịọzọnnukwu egwuregwu na niche a。 Ụlọọrụa、karịsịa、mgbasa oziazụtaranamkpokọta3,846 na Google ma jiri ihedịka $ 60,000 kwaọnwa.
マタクウオ： Otu esi ede maọdịkarịaala otu nnukwuọdịnayan’otu izu ugboro ugboro
Isi nke ise 5.Growtọブログ
Eziokwudịmwute nkeọtụtụndịna-edeblọgụnọna yaọwerelaọtụtụoge iji wuliteakwụkwọha。取得nweta nyocha puku peejimbụha nwere ike wasọnwa、ụfọdụblọọgụọkachamaraọfụmana-abịabakwaebeahụ.
Ndịabụatụmatụụzọihe ise ga-enyeregịaka iwereblọgụgịsite na nlele peeji 1 ruo 1,000.
1. Dei ihe ndi mmadu choro iguta
Ndịmmadụna-erijuafọna mmelite mgbasa ozi nke mgbasa ozi、ndepụtaoziọma、oziịntanetị、naụdịmgbasa ozidịiche iche。 Ọna-esikwu ike ime kandịmmadụgụọịdịnayagị。 Agbanyeghị、ịka nwere ikeịmenkeọmamaọbụrụnaịmaraonyebụndịna-egegịntịbụna ihe ha na-achọ。 Chee echiche banyere ogheredịna nichegị、ụdịọdịnayaadịghịefu na otu ga ga-esi wetandịna-egegịntịuru.
Ndịabụihe ga-enyeregịaka na nyochagị：
Jiringwaọrụmgbasa ozina-elekọtammadụiji soro ihe na-aga nkeọmanaソーシャルメディア。 N’ebedịotúa、ịnwere ikeiwepụtaechicheọdịnayanke na-enweta ezigbo nzaghachi site na mgbasa ozi mgbasa ozi.
JiringwaọrụọdịnayadịkaZaaỌhaịchọrọmakaajụjụndịama amandịmmadụna-ajụna Google.
Jiriọnụọgụnlele na YouTubechọtaisiokwundịmmadụnweremmasịna ya.
Jiri ngwa nyocha okwu ijichọpụtaisiokwuụfọdụndịmmadụna-achọn’ime nichegị。 Nwere ikeiwepụtaọdịnayadabere na isiokwundịahụ.
2. Solo ndi obodo gi
"いけかけらたないめ" abụghịziaha egwuregwuahụ.
Kwesịrịịkekọrịtaがgịugboro ugboroを投稿しています。 Ọbụrụn’ịkpọkugịkaịsonyerebọọdụPinterest nke dabara na nichegị、debanye makekọrịtanaịzaajụjụugboro ugboro。 Ọbụrụna i sonyere nandepụtankendịna-edeblọgụnwere echiche、ọdịmmabụna haga-ekerịtaihe ibe ha oge niile-kwa izu maọbụkwaụbọchị。 Nke a ga-enyere akaọgụgụgịna itinye akagị.
Jirinwayọchoo ebogị-kwụọndịọzọnọna yaụgwọma soro hajikọọ.
Nyere別名na mmemme Twitter。イクナナザガチンディオツンディオゾ。 Kekọrịtaederede naakwụkwọakụkọgị。 Gbakọọmakwụghachiụgwọblọọgụịhụrụn’anya site naịgosipụtaotu izu maọbụọnwa.
Jụọotúịga-esi nyere onyeyezọaka maọbụsite n’inyendịọbịaakwụkwọozi。 Na-erengwaahịaha、jirinjikọhammekọ、kwalitenjikọha na mgbasa ozigịmgbeịna-edecha ha。 Dịkaohere iji weghachitendịna-edeblọgụ、ndịna-edeblọgụa ga-echeta enyemakagịmakpọọgịkaịbịa.
Ọna-ewe m iwe mgbe mchọtarablog nwere isiokwu enwere m obianụrịnaanịịchọtaọdịnayaahụna nnukwu ederede、paragraf ole na ole、enweghịisi maọbụmgbọna oberemkpụrụ Nkeahụna-achụpụm.
N’elu ihe mhụtụrụlan’elu、blọọgụgịekwesịghịijimmapụtanapịapịa。かま、nwayọgosindịna-agụya ihe ha dere。 Mara nsogbu ogendịna-agụakwụkwọgịweeghọtaihe kpatara ha ijinọrọnasaịtịgị.
Nke abụiheịga-eme iji mee ka bloggịdịkwuomfeọgụgụ：
Ebuliブログgịサイトna iji isi、sub-isi、isi mgbu、maọbụndepụtaedepụtara。 Nke a na-enyereọdịnayagịakaịhazika ahaziri nkeọma.
Kewaaブログgịna ngalaba maọbụパラグラフ。 Mgbidi ederede nwere ike iyi ihe na-emenyeụjọma na-ejundịna-agụya anya.
Zere ijimkpụrụedemede mara mma。 Nọgidesieike namkpụrụedemedenchekwaweebụdịkaArial、Georgia、Times、wdg.
Jiri Bekeedịmfe ma deeahịrịokwudịmkpụmkpụ。 Mee kaamụrụiheịga-agụmakaụmụakwụkwọklas nkeasatọ.
Gbanyụọ、ịzaajụjụnablọọgụbụụzọkacha eleghara anya maka ewu okporoụzọblog-nkekachasịn’ihi nandịmmadụna-ackụime ka nnabata、mkparịtaụkabara uru naụbwearaawemm awemwe awem awem awem awem awem awemm Agbanyeghị、ịzaajụjụbanyereblọọgụbụụzọdọmma maka ewu okporoụzọna-adịkwan’efu-enweghịikeịgbaghankeahụ!
E nwere iwuọlaedoabụọiji mee kankọwamakaịdeblọgụ：
Dee ezigbonkọwamgbe niile。 Ọbụrụnaịnweghịihe bara uruịgbakwunye namkparịtaụkaahụ、ahapụlaikwu（“Daalụ-nnukwu post”…haabaghịuru）
ナーン・ドベ・ンジコ・エベ・ダバーラ・アダバ。 Achọgharịlaspam、n’agbanyeghịịdịọnwaleọnwere ikeịbụ; ọga-agbakwasịgị.
Mgbe iwuọzọ（ọbụghịiwuọlaedo、ikekwe）、ọbụrụnaụhapụnjikọ、enyela URL nkeブログgị。 Kama nkeahụ、jikọtapost nkegịmkpa nke na-agbakwunye uru na post namkparịtaụkambụ。関連性bụisi ebe a.
んずななたねịなQ&Abụebedịmmaịnwetaoche n’ihundịna-egegịntịnweremmasị、nweremmasị。 Ihe a bu n’uche nyochaamkparịtaụkana-aga n’ihu na nichegịkaịwee chime mgbeịnwere ihe ga-enyeregịaka ikwu（maọbụghị、ọbụghịpostọbụlaga-abụohere-mana here -eme）。 Ga-achọezigbo onyena-agụakwụkwọ、dịka Feedly、ijirụọọrụa.
Notchọtaghịotu dabara adaba maọbụezuru ohere iji nweta ihe?
Mepụtaụfọdụọdịnayaomenalametụtaramkparịtaụkana-ekpoọkụ。 Dịkaọmụmaatụ、ọbụrụnammadụajụọotu esi eme koodu .htaccess koodu、ịnwere ike ide nkuzi wee zipu ya nablọọgụgị-mgbeahụ、na ngalaba Q&nkesaịtịahụ、zaa onyechọrọya na teaser、jikọha nablọọgụgị。 iji nweta koodu na demos zuru ezu。 Nsogbubụnaọbụrụna otu onyejụrụajụjụahụ、ndịọzọnwere otuajụjụahụ-azịzananjikọtaokwugịga-aga n’ihuna-adụhaọdụma ogeahụbịara.
N’ihe banyere usoro Q&イジ・ミー・イエ、エム・ナ・アクワド
Quora、Klout、na Yahoo! Azịza-ndịabụụzọatọkachasịmma nke ikpo okwu Q&あ
StackOverflow-ọbụrụnaịbụonye nkwusa na-ereakwụkwọmmemme.
マタクウオ： Choo uzo ozo iji tinye mon blog gi weegụpụtanke Kevin MuldoonỌmụmụikpe na-ere BloggingTips.com maka $ 60,000.
Isi nke 7. Iji BlogdeblọgụEfu
N’agbanyeghi naakụrụngwanaarụụrụweebụbara uru nantanetị、nsogbu a na-akpọliteha n’etiti usorondịọzọniile maọbụ/ na ihe mgbe ochie.
Dika onyinye nke nkpu maka iguta akwukwo m rue ebe a、aga m enye gindepụtanke oru efu ndi anyi ji eme ihe n’oge nile na WHSR。 En ore m obiụtọ、mga-achọkaịnwee iheịgankeọmana njemịdeblọgụgị.
Mgbe Emechara-Ọgan’ihu naụtọasụsụ.
文法-Kasịewu ewu nantanetịnnyemaaka.
Hemingwayアプリ-Jiri ngwa a dee mkpirikpi na nkwuwa okwu.
Nnwere onwe.to-Gbochie ebenrụọrụweebụna-adọpụuche kaịnwee ikelekwasịanya n’ide ederede.
Fotor-Dezie machepụtangwaọmarịchaihe osise maka mgbasa ozi mgbasa ozi、akwụkwọmmado、akwụkwọịkpọoku wdg
Canva-Chepụtaọmarịchaihe onyonyo na nke mgbasa ozi mgbasa ozi.
ỌkachamaraỌtọ-Mepụtaihe osise mara mma site na iji ndebiri n’efu na ihe osise emere.
JPEG Obere-Belata nha nkefaịlụ.jpeg.
PNG obere-Belata nha nke .pngfaịlụ.
Skitch-Iche ndetu ihe onyonyo.
ỌchịchịPic-Ngwongwo na-emeri ihe ntughari nke onyinye.
Pik na Chart-Mfe okike ihe omuma ihe omuma.
Favicon.io-Onyekachasịeweta favicon jenerato、mgbeọbụla.
OnyeNchọtaアイコン-Akwụkwọndekọakara ngosi buru ibu.
Faili Morgule-Ihe kariri onyonyo 350,000 maka ijiazụmaahịa.
Ngwaahịa-Ebendekọihe onyonyo nwere foto mara mma nke agbakwunyere kwa izu.
WHSR Ihe Oyiyi Oyiyi-Ihe ngosi efu bu nke ndi okike ulo.
ンツジアカ & にょちゃ
AkwụkwọEziokwu nkeỤwa-Enweghịochi egwu-oziụwaozugbo sitere na CIA.
ỤdịỤgha-Chọtaisiokwu na-ekpoọkụkachaọhụrụna BuzzFeed.
Ihe okike ide ihe-Echiche na kpaliri iji merie ederede mgbochi.
アラートGoogle-Nweta oziịntanetịdịnjikere naọdịnayaọhụrụịna-achọ.
ソーシャルメディア、アフア & SEO
NgwáỌrụWeebụBing-Ngwáọrụnyochasaịtịn’efu nke Bing.
NgwáỌrụウェブマスターGoogle-Ngwáọrụnyochasaịtịn’efu nke Google.
Ebube di nma-Nbudata n’efu na-enyegịohere inyochaprofaịlụnjikọsaịtị（CF / TF）ngwa ngwa.
Na-aga Bay-Azụahịa、ire & ngwaọrụakpaaka
Ochichi ndi ozo di otua-Lelee maka peejindịgbagoro nablọọgụgị.
Dịka Explorer-Lelee metrik nkeọdịnaya（maọbụndịasọmpi）gị.
ツイートデッキ-Ijikwa otutuakaụntụTwitter n’otuダッシュボード.
Buzz Sumo-Chọtaọdịnayadịegwu nandịna-eme iheọfụmananetwọmgbasa ozimmekọrịtaọha
IFTTT-Mbipụtaọdịnayana nyiwe mgbasa oziọtụtụmmadụna-adịmfe.
NchịkọtaNtanetị & NrụpụtaWeebụ
Google Analytics-Stats Web N’efu.
Matomo-NchịkọtaGoogle Analytics Google.
NchịkọtaYouTube-統計na vidiyo YouTubegị.
WP Statistics-Tụleeblog WordPressgịnandịọzọ.
Ụzọnhazi-Usorodịmfe na nhazi njikwaọrụ.
Nnyocha Ule-Leleeọsọwebpage zuru ezu.
GT Metrix-Nwalee ma soroウェブページの読み込みọsọn’ụzọzuru ezu.
1. Ego ole kaọna-eriịmaliteblọọgụ?
Ego ole echere kaịmaliteblọọgụgụnyereaha ngalaba na nnabataweebụdịn’okpuru $ 100 kwaafọ（erughị$ 10 kwaọnwa）。 Ọnụego a dabere nablọọgụejiri akagị（iji WordPress）。 Nkwụsịnkeụgwọahụga-abụ：$ 15 kwaafọmaka aha ngalaba .com na ihedịka$ 60 kwaafọmaka ego nnabata web.
2. Kedu otu esiakwụndịna-edeblọgụụgwọ?
Iji nweta ezigbo foto maka otu esiakwụndịna-edeblọgụụgwọ、edepụtaram ha naụdị2-otubụebeịna-emesondịahịamaọbụndịmgbasa ozi ozuger mebem e nyugboeịbemeụny ug ny ny bụnetwọknyere.
mgbegịnandịahịamaọbụndịmgbasa ozina-emekọrịtaihe、ịna-enwe ike ijikwaọnụahịaahụ。 Inwere ike inweta ego site na：
– ダイレクトmgbasa ozi
– Ederede na biputere投稿nkwado
Enwereọtụtụnyiwe ebeịnwere ikeịmaliteblog efu taa、nke agụnyereWordPress.com、Tumblr maọbụBlogger。 Ijimepụtablog n’efu、iheịga-emebụịdebanyeaha maịnwere ikeịmaliteibipụtaọdịnayagị.
Onweghịihena-abịan’efu n’ụwaanyị。 weghọmdịnaọtụtụịdeblọgụntanetịn’efu：
– E nwere iwudịn’elu ikpo okwuọbụlaịkwesịrịidebe
– Aha ngalaba nkeblọọgụgịkaọbụrụサブドメインdịka「myblogname.wordpress.com」maọbụ「myblogname.tumblr.com」
– E nwere obereọrụ、plugins nanhọrọisiokwuịnwere ikeịmeblọọgụgị
– Ọtụtụmgbe、ikpo okwuanaghịakwụọgwọiji gbochie bloggị
Ana matụaro kaịmalite bloggịsite na iji WordPress.org kwadoro onwegị（dịka ihe m kpuchiri na ntuziaka a）。 Ewezụgaimeri mmachi nke blog efu、mmụbanke bloggịnwereenweghịnjedebe.
Ma、lee ihe gbuteazụ：
E nwere iwudịn’elu ikpo okwuọbụlaịchọrọka edebe
Aha ngalaba nkeblọọgụgịga-abụsubdomaindịka“ myblogname.wordpress.com” maọbụ“ myblogname.tumblr.com”
Enrere obereọrụ、plugins nanhọrọisiokwuịnwere ikeịmena bloggị
Ọtụtụmgbe、usoro ikpo okwu n’efu na -emechi ohere nke monetizinggịblog
Enwetara ihuenyo MpempeakwụkwọMgbasa Ozi WordPress。